MACHINE CLH1000 Soo-saareyaasha iyo Soo-saareyaasha Shiinaha HYDRAULIC PRESSING Chenli
Ku soo dhawow hamiga horumarka leh himilo mustaqbal leh, mustaqbal wanaagsan oo aan dadaal lahayn aan ku darsanayn
▲ Qalabka farsamada ayaa hoosta ka xarriiqaya warshadda cusub ee Chenli, Waxay ku taal bartamaha birta la been abuuray, gobolka hebei. Waxaan ku hawlannay injineerka leh khibrad dhowr iyo toban sano ah lataliyeheenna xagga farsamada. Talaabo talaabo waxaan u soo saaraynaa qalabka farsamada. Sawir kasta ilaa rinjiga waxaan ula dhaqmeynaa talaabo kasta si adag. Shayga ayaa ah mid wax ku ool ah isla markaana leh qiimo tartan, kaasoo keena nidaam badan. Isla sanadkaas waxaan soo saarnaa oo iibinaa 87 qaybood oo ah mashiinnada riixa xargaha. Qalabka farsamada ee Chenli waxaa loo isticmaalay waaxyo kala duwan waxaana loo dhoofiyay Malaysia, Singapore, Iran, India iwm.
▲ Ma doonayno cabirka weyn. Annagu kuma daba-galno tirada amarada, daacadnimada, daryeel wanaagsan, hal-abuurnimo, saxnaan, raashiin aad u sarreeya oo hawl iyo qiimo leh, aan ku gaarno suuqyadeena sumcad wanaagsan. Waxaan sii wadi doonnaa inaan xaqiijino alaabada tayada sare leh, anagoo isku dayeyna inaan si gaar ah u takhasusay, waxaan gacmaha is qabsan doonnaa macaamiisha u jiheysa isla jihada, gaarista guul weyn.
Suuqyo badan oo kuyaala dalka Shiinaha, alaabooyinka Chenli waxay iibiyaan isbarbardhiga ugu fiican ee la mid ah badeecadaha la midka ah ee dukaamada ganacsatada horteeda (waqooyiga ee Wabiga Changjiang, wiishashka kor u kaca iyo xarkaha ayaa iibiya si aad uga wanaagsan kuwa alaabada kale oo la mid ah); Shirkadaha ganacsiga ajnabiga waxay sidoo kale jecel yihiin alaabooyinkayada sida ugu fiican sababtoo ah alaabooyinka 'tayada wanaagsan iyo cayiman si fiican loo helay. Amarada wareegga ayaa si joogto ah uga dhiga badeecada boqolkiiba boqol ee suuqyada caalamiga ah kuwo aad iyo aad u sarreeya, Gaar ahaan waddamada Yurub qaarkood (France, Italy, England, Spain iwm) Ansixinta badeecada ayaa waliba ah mid aad u sarreysa; horumarka baaxadda leh ee shirkadda, Balaadhinta warshadaha oo sii ballaaranaya, caddeyn xoog in aan yeelan doonno mustaqbal sharaf badan.
Astaamaha silsiladaha xadhkaha xargaha
▲ Xadka xadka culeyska shaqada oo xadidan
▲ Qaab riix riixan
▲ Caabbi heer sare ah iska caabin ah
▲ Kaydinta qiimaha xarigga fiilada
▲ Hubso dhererka saxda ah
▲ Farsamo-yaqaanno horumarsan iyo hufnaan
▲ Xalka wanaagsan ee xallinta khilaafaadka wuxuu ku shaqeeyaa boos shaqooyin xadidan
MACHINE CLH1000 Cabbirka Badbaado Badbaadinta Shaqada Xakameynta HYDRAULIC.
Hore: MACHINE CLH1500
Xiga: MACHINE CLH800 OO KU SAABSAN MACLUUMAADKA HYDRAULIC
Mashiinka Riixida 100 Ton Wire
Mashiinka Xarig Jiidista Weyn ee Weyn
Mashiinka Riixida Xadhig yar oo Wire ah oo Yar
Mashiinka Xarigga Fiilo ee Wire
MACHINE CLH100 CIIDAMADA CIIDAMADA
XARUNTA CILMKA CIIDAMADA (DSQH) CDH TYPE
XARUNTA FURAHA GUUD EE G80